Ukususela Wikipedia, le encyclopedia free
Hayi mazingabhidaniswa print screen.
ushicilelo Screen yindlela yoshicilelo apho enemingxuma isetyenziselwa ukudlulisela i-inki kwi zeendawana, ngaphandle kwiindawo zenziwe kungenwa ukuya inki ngumntu istensile ngokubhloka. A blade okanye squeegee isusiwe ngapha kwekhusi ukuzalisa apertures mesh evulekileyo i-inki, yaye inxeba reverse ngoko kubangela iskrini ukuyiphatha loo zeendawana okomzuzwana ngapha komgca contact. Oku kwenza i-inki ukuba umanzi zeendawana kwaye zitsalwe ngaphandle apertures umnatha njengoko screen kuntshula emva kwencakuba lidlulile.
ushicilelo Screen kwakhona indlela istensile yokwenza ushicilelo apho uyilo akumiselweyo isisitheliso ipholiyesta okanye enye mesh ocoliweyo, kunye neendawo blank isale kukho into engena kungenwa. Ink uye wanyanzelelwa ngaphandle Ekungeneni umnatha yi yokugcwalisa yakudubula okanye squeegee kunye ilele le zeendawana, zifakwa umphezulu yoshicilelo ngexesha stroke squeegee. Njengoko iskrini imijubo ukusuka zeendawana i-inki uhlala phezu zeendawana. Kwakhona eyaziwa ngokuba isilika-screen, screen, serigraphy, kunye noshicilelo serigraph. Enye umbala ishicilelwa ngexesha, screens eziliqela ukuze zingasetyenziswa ukuvelisa umfanekiso emibalabala okanye uyilo.
Kukho amagama ahlukeneyo zisetyenziselwa izinto ngokwesiseko ngendlela efanayo. Ngokwemveli inkqubo ngokuba yoshicilelo screen okanye yoshicilelo silkscreen kuba isilika yasetyenziswa kwinkqubo phambi kokuba kusungulwe ipholiyesta umnatha. Okwangoku, imisonto eyenziwayo ezisetyenziswa kule screen inkqubo yoshicilelo. Umnatha uthandwa kakhulu ukusetyenziswa jikelele yenziwe ipholiyesta. Kukho ekhethekileyo ukusebenzisa izinto wocingo lwe nenayiloni kunye insimbi ezifumanekayo kumshicileli screen. Kukho iintlobo ezahlukeneyo isayizi enemingxuma eya lokugqiba ngesiphumo uze ukhangele loyilo ogqityiweyo kwi eziphathekayo.
Kuba ngakumbi ngembali yoshicilelo screen, nceda uye ku https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_printing
ixesha Post: May-27-2018